လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း: ၂၀ လီတာဆံ့သော ပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ ကို တစ်နာရီအတွင်း ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF 600
VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine isahigh-capacity machine suitable for 20L pure water bottling manufacturers. Daily capacity can be up to 600 jars per hour.
The machine applies the most advanced technology of the United States and is made according to ISO: 9001- 9001 standard. It is manufactured, imported and distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company and exported to ASEAN countries.
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 က လုပ်ဆောင်မှု မြင့်မားပါတဲ့ စက်ဖြစ်ပြီး ၂၀ လီတာ ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက တစ်နာရီမှာ ပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ အထိ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်ဟာ U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေဆီ တင်သွင်းဖြန့်ချီပါတယ်။
Nowadays, the demand for mineral water and pure water is increasing. So, this VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine would beagreat choice for you. With its modern functionalities, innovative smart control system and electric saving feature, the machine has been chosen byavariety of manufacturers.
ယနေ့ခေတ်မှာ ရေသန့်တွေအပေါ် မှီတည်လာရတာဟာ အလွန်များလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 က ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မီသော လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲတီထွင်ထားတဲ့ ကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ လျှပ်စစ်စား သက်သာစေတဲ့ လက္ခဏာတွေကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်သူအများစုက ဒီစက်ကို ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Our prices are reasonable and flexible depending on customers’ diverse demands on machine capacity, Viet An self-manufacturing machines or Viet An’s imported machines. The average price ofafilling machine ranges from 5,900 USD to 100,000 USD.
ကျွန်တော်တို့ဆီက စက်တွေဟာဆိုရင် Viet An မှ ထုတ်သောစက် ဒါမှမဟုတ် Viet An မှ တင်သွင်းသောစက် စသဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲပြီး ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်း သင့်လျော်ပါတယ်။လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ရဲ့ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းကတော့ 5900 USD မှ 100,000 USD အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။
VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is the best choice for the customers
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ဟာ ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
We are pleased to introduce our most innovative product - VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine. With the modern and automatic filling steps integrated, the business would be able to remarkably reduce manpower.. The operator just needs to install and launch the machine for one time. Then it will automatically launches washing, filling and capping functionalities.
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အဆန်းသစ်ဆုံးသော စက်ဖြစ်တဲ့3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ကို မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ဒီစက်မှာ အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ စနစ်တွေပါတာကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေက လူတွေရဲ့အင်အားကို လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ အော်ပရေတာက ဒီစက်ကို တပ်ဆင်ပြီး ပထမတစ်ကြိမ်သာ စတင်လုပ်ဆောင်ပေးရမှာ ဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ စက်က လောင်းဖြည့်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ခြင်းတွေကို အော်တိုလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်။
With3built-in automatic steps, this VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine would help the business save the installation space maximumly, increase productivity and reduce manpower.
အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့်ကြောင့်3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 က တပ်ဆင်တဲ့နေရာကို အများကြီးမကုန်အောင် ခြွေတာပေးနိုင်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေ များများ ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။ လူသားတွေရဲ့ စွမ်းအင်တွေကိုလည်း လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Besides, with innovative technical improvement, VAQGF 600 model enables integrating additional automatic steps, bringing completely automatic production of jar filling.
ဒါ့အပြင် ဆန်းသစ်ထားတဲ့ နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူ VAQGF 600 စက်မှာ အခြားအော်တိုအဆင့်တွေ ပေါင်းထည့်နိုင်ပြီး ပုလင်းတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းကို အပြည့်အဝ အော်တိုလုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
For more details on the automatic steps that can be integrated into VAQGF 600 machine, please refer following automatic stages - purchased separately
VAQGF 600 စက်မှာ ပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ အခြားအဆင့်တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Technical specifications of VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ရဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
Like previous3in 1 automatic jar filling and capping machines supplied by Viet An, this VAQGF 6003in 1 automatic filling and capping machine applies the most advanced technology of the United States. The machine is either manufactured by Viet An or imported from America, Italy, Taiwan, China.
Viet An မှ ခုတ်လုပ်ထားတဲ့ အခြားလောင်းဖြည့်စက်တွေလိုပဲ VAQGF 600 စက်ကို U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီစက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှလည်း ထုတ်လုပ်သလို အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ထိုင်ဝမ်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံများမှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
It is equipped with more washing, filling and capping heads compared to other machines of lower capacity.
ဒီစက်မှာ ယခင်ကစက်တွေနဲ့မတူလဲ ပိုများတဲ့ ဆေးကြောခြင်း၊ဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ခြင်းခေါင်းတွေ တပ်ဆင်ထားတယ်။
With3automatic steps integrated, the manufactures can use it to produce up to 600 jars of 2- liters per hour.
အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့် ပေါင်းစပ်တပ်ဆင်ထားတာကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေက တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်
The closed processes of washing, filling and capping are automatically operated, ensuring hygiene and safety.
ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း ဖြစ်စဉ်တွေက အော်တိုလုပ်ဆောင်နေပြီး စားသောက်ကုန်ရဲ့ လုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုကို သေချာစေပါတယ်။
First step: Automatic 5Gallon cleaning
Conveyor belt, jar holders, conveyor motor, stainless steel pressure booster pumps
The 5G(20L jars without caps are transferred to the jar holders of the machine. The conveyor belt transfers the jars through the conveyor motor. During this process, the water will be sprayed from the washing heads inside the jar holders to thoroughly clean the jars. The washing process is operated atahigh speed through the smart control system integrated onto the machine body. We use pure water with sterilized ozone for washing the jars, ensuring the jars are completely clean and sterile before being transferred to the filling heads. The stainless steel bumping heads are directly imported from Italy, generating big pressure to spray and wash the jars thoroughly (both inside and outside)
ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်၊ပုလင်းထည့်စရာ၊ရွေ့လျားစက်မော်တာ၊အစွန်းခံသံမဏိ ဖိအားမြှင့်တင်ပေးတဲ့ ရေစုပ်စက်၊အဖုံးမပါတဲ့ ၂၀ လီတာပုလင်းစတာတွေကို စက်ရဲ့ ပုလင်းထည့်တဲ့နေရာဆီ ပို့ပေးရပါမယ်။ ရွေ့လျားစက်ခါးပတ်က ပုလင်းတွေကို ရွေ့လျားစက်မော်တာကိုဖြတ်ပြီး ရွှေ့ပေးပါမယ်။ဒီလိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုလင်းထည့်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်းက ပုလင်းတွေကို သေချာသန့်ရှင်းအောင် ရေနဲ့ပက်ဖြန်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကြောခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်က စက်ရဲ့ ကိုယ်ထည်မှာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်ကိုဖြတ်ပြီး မြင့်မားတဲ့အရှိန်နှုန်းနဲ့ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ရာမှာ ပုလင်းတွေရဲ့ ပိုးသတ်ထားပြီး သန့်ရှင်းမှုကို သေချာစေဖို့ ကျွန်တော်တို့က ပိုးသတ်ပေးတဲ့ အိုဇုမ်းပါတဲ့ ရေသန့်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ အစွန်းခံသံမဏိရေစုပ်စက်ခေါင်းတွေဟာ အီတလီကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းတာဖြစ်ပြီး ရေဖြန်းတဲ့အခါ ဖိအားအများကြီးသုံးသဖြင့် ပုလင်းအတွင်းအပြင်ကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်ဆေးကြောပေးနိုင်ပါတယ်။
Second step: Automatic jar filling with pure water
The 5G 20-liter jars, after being thoroughly cleaned with pure water with sterilized ozone in step 1, will be transfered to the filling heads. To fulfill the capacity of 600 jars of 20L/hour, the VAQGF600 filling machine is equipped with4filling heads. This model is equipped with one additional filling head in compared with VAQGF450 model.
These4filling heads are connected to the pure water source through the duct system. The water duct is made in premium soft polymer of high durability. After being transferred to the4filling heads, the jars will be fully filled with pure water through the filling heads. The jars filled with water then will be transferred to the capping heads.
အဆင့် ၁ မှာ ဖော်ပြထားသလို ပိုးသတ်ပေးတဲ့ အိုဇုမ်းပါတဲ့ ရေသန့်နဲ့ဆေးကြောထားတဲ့ 5G ၂၀ လီတာ ပုလင်းတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းဆီကို ရွှေ့ရပါမယ်။ တစ်နာရီမှာ ပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ ဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက် VAQGF 600 စက်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၄ ခုနဲ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ VAQGF 450 နဲ့ယှဉ်လျှင် ဒီစက်မှာ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း အပိုတစ်ခု ပါပါတယ်။ ဒီခေါင်း ၄ ခုဟာ ပြွန်စနစ်ကိုဖြတ်ပြီး ရေသန့်အရင်းအမြစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတယ်။ရေပြွန်ကို ကြာရှည်ခံပြီး နူးညံ့တဲ့ ပရီမီယမ်ပေါ်လီမာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်းတွေဆီ ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါ ထိုခေါင်းတွေမှတဆင့် ပုလင်းတွေကို ရေသန့်အပြည့်ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဖြည့်ပြီးတဲ့ပုလင်းတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ရပါမယ်။
With the application of the most advanced capping technology of the United States, the capping heads are made of stainless steel and coated withapremium 304 stainless steel layer with the shelf life of above 20 years. The filling heads are connected to the cap duct through the cap duct system. The capping process is operated under an adequate pressure generated through the thrust of the piston, ensuring that the jars are firmly capped without being deformed.
To avoid reversal during the capping process and ensure the constant operation of the VAQGF 6003in 1 automatic filling and capping machine, it is recommended that the customers should by an automatic cap loading machine. Please refer below for more details on the cap loading machine.
U.S ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့အတူ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေကို အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး နှစ် ၂၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ ပရီမီယမ် 304 အစွန်းခံသံမဏိအလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဖြည့်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေက ဖြည့်ပေးတဲ့ပြွန်စနစ်နဲ့ ဆက်သွယ်ထားတယ်။ ဒီလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်က ပစ်စတိုတွန်းအားကိုဖြတ်ပြီး လုံလောက်တဲ့ ဖိအားအောက်မှာလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုလင်းတွေကို အဖုံးဖုံးပေးတဲ့အခါ ပုံစံမပျက်စေအောင် သေချာလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အဖုံးတပ်နေစဉ် ပုံစံပျက်သွားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့် VAQGF 600 စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတည်မြဲစေဖို့ ဝယ်ယူသူတွေကို အော်တိုအဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက် ဝယ်ယူဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အော်တိုအဖုံးသယ်တဲ့စက်အကြောင်းကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
The automatic steps that can be integrated into the VAQGF6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine
Nowadays, automation within manufacturing industry is emerging. Thus, to follow-up this increasing trend, the business should apply automatic machines to replace workforce in order to save manufacturing and business expenses. Besides, this also helps to bring high productivity.
All of the3in 1 automatic filling and capping machines supplied by Viet An can be perfectly compatible with other machines to build upafully automatic and modern filling line.
Below are some other machines to support manufacturing of bottled water (20L) that the customers can refer after purchasing the VAQGF600 jar filling and capping machine.
VAQGF 600 စက်မှာ ပေါင်းထည့်လို့ရတဲ့ အော်တိုအဆင့်များ
ယနေ့ခေတ်မှာ စက်ရုံတွေမှာ အော်တိုလုပ်ဆောင်မှုတွေက ခေတ်စားလာပါတယ်။ဒါကြောင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်ဖို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချဖို့ အလုပ်သမားအင်အားကို လျှော့ချရန် အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့စက်တွေကို အစားထိုးတပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီစက်တွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်း များများ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီမှထုတ်တဲ့3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေက အပြည့်အဝ ခေတ်မီပြီး အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောလိူင်း တည်ဆောက်ဖို့ အခြားစက်တွေနဲ့လည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ရေသန့်လုပ်ငန်းတွေအတွက် VAQGF 600 စက်ကို ဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါ အခြားအထောက်အကူပြုတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေလည်း ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
This machine is extremely modern and smart and can replace2human labors.This machine is extremely modern and smart and can replace2human labors.The machine is desgined with2decapping heads. There isasmart control panel that automatically operates and switches off when an incident arises. There is alsoapressure generating system to support decapping process. The body of the machine is made of 100% of 304 premium stainless steel which is shiny and has no rust, remaining the shelf life of above 20 years. With this machine, the decapping process is promptly operated while still ensuring that the caps are kept intact. This enables the caps to be reused for cost saving.The 20L jars are often repurchased by the water bottling manufacturers to save manufacturing cost. Thus, this machine isaperfect choice for these units. Using manpower to operate this process might result in inadequate productivity and quality of the caps after being separated from the jars.
ဒီစက်က အလွန်ခေတ်မီပြီး စမတ်ကျတဲ့အပြင် အလုပ်သမား ၂ ယောက်နေရာအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို အဖုံးချွတ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၂ ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစက်မှာ ပြသနာတစုံတရာပေါ်ပေါက်တာနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပေးသော စမတ်ကျတဲ့ ထိန်းချုပ်ဘောင် ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဖုံးချွတ်တဲ့လုပ်ငန်းကို ကူညီဖို့ ဖိအားထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်လည်း ရှိပါတယ်။
ဒီစက်ရဲ့ ကိုယ်ထည်ကို တောက်ပသော၊သံချေးမတက်သော၊နှစ် ၂၀ ကျော် သက်တမ်းရှိသော 304 ပရီမီယမ် အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ၁၀၀% ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
ဒီစက်နဲ့ အဖုံးချွတ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အဖုံးတွေကို ပုံစံမပျက်စေပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့ အဖုံးတွေကို ပြန်အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေက ၂၀ လီတာဘူးတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချဖို့ ပြန်ပြီးကောက်ယူပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုယူနစ်တွေအတွက် ဒီစက်က ပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူအင်အားနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းနှေးသလို ပုလင်းတွေကနေ အဖုံးကိုချွတ်တဲ့အခါ အဖုံးပုံစံတွေ ပျက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
(BG-1200 အော်တိုအဖုံးချွတ်ပေးတဲ့စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်များ)
2. ST-600 automatic external jar washing machine
The ST-600 machine is in line with the automatic BG-1200 decapping machine After being decapped, the jars will be transferred to the VAQGF 6003in 1 automatic filling machine
With5washing heads, washing brush system capable of rotating 180 degrees all parts of the jars are thoroughly cleaned without using manpower.
With this ST-600 automatic external jar washing machine, the customers can save labor expenses for2operators.
Besides, the customers can make full use of the water source from the membrane to save the expenses maximally. Capacity of the machine is up to 450-600 jars/hour.
ST-600 စက်ဟာ BG-1200 စက်နဲ့ မျဉ်းတပြေးတည်းရှိပြီး အဖုံးချွတ်ပြီးတဲ့ပုလင်းတွေကို သန့်ရှင်းပေးတဲ့စက်ဆီသို့ ရွှေ့ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာ သန့်ရှင်းပေးတဲ့ ခေါင်း ၅ ခုပါရှိပြီး ၁၈၀° လှည့်ပတ်ကာ ပုလင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် အော်တိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် အလုပ်သမားအင်အားကို အသုံးပြုစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ST-600 စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ အော်ပရေတာ ၂ ယောက်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ဒါ့အပြင် အလွှာပေါ်က ရေအရင်းအမြစ်ကို အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီကို ပုလင်းပေါင်း ၄၅၀ ကနေ ၆၀၀ အထိ သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
(ST-600 ပုလင်းသန့်ရှင်းပေးတဲ့စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
In order to complete 600 5G jars, the customers might need at least one operator to transfer the empty jars to the VAQGF6003in 1 automatic filling machine. However,with this automatic jar loading machine (4 loading heads integrated),4empty jars will be loaded simultaneously without manpower. Shelf life of the machine might reach above 20 years. This machine is currently provided at the price of 65 million dongs. Thus, it is estimated that the customers can save up to7millions dongs of labor expenses (for 1 operator). And the machine expense can be depreciated after only less than 1 year. In the next 19 years, the customers can use this saved money to reinvest for the purposes of expansion and increase the competitiveness.
BL 600 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်
5 G ဘူးပေါင်း ၆၀၀ ကို ထုတ်လုပ်ပြီးစီးဖို့ ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ ဘူးလွတ်တွေကို VAQGF3in 1 လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ထဲကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့ အနည်းဆုံး အော်ပရေတာတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ဒီစက်မှာ သယ်ယူပေးတဲ့ ခေါင်း ၄ ခုပါတဲ့အတွက် လူလုပ်အားမပါဘဲ ဘူးလွတ် ၄ ခုကိုတပြိုင်နက် သယ်ယူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်တဲ့သက်တမ်းကတော့ အနှစ် ၂၀ ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ အခုလက်ရှိဈေးနှုန်းကတော့ 65 million dongs ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေက အော်ပရေတာတစ်ခုအတွက် ကုန်ကျစရိတ်7million dongs လျှော့ချနိုင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စက်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း တစ်နှစ်ထက်နည်းတဲ့ ကာလတစ်ခုမှာ လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နောက် ၁၉ နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ဝယ်ယူသူတွေက ဒီခြွေတာလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ စီးပွားရေးတွေ ချဲ့ထွင်နိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
Technical specifications of BL-600 automatic jar loading machine
(BL 600 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 600
Loading head (ပစ္စည်းသယ်သောခေါင်း) 4
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 1650x960x1200
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 100
As above statement, with justa3 in 1 automatic machine, the customer still need one operator to pull the caps into the cap tray. This manual process might result inacap reversal ratio of 3-5%. This will dramatically affect the manufacturing process, causing higher manufacturing expenses. In addition, the operators also need to strictly follow the cap loading process.
This CL-1200 automatic jar cap loading machine will help to ensure 100% of the caps are not reserved. Thus, the operator do not have to pay much attention to this process. The machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the cap heads. Thanks to the air blowing system mounted on the conveyor, 100% of the caps are supplied into the cap duct in the right direction. Thanks to large holding capacity of the cap duct, the caps only need to be supplied once per shift.
အထက်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့သလိုပါပဲ အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့်အပြင် ဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းထဲကို အဖုံးတွေသယ်ဖို့ စက်တစ်ခု လိုပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင် ဒီအဆင့်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် အချိုးအရ 3-5% အထိ အဖုံးတွေ ပျက်စီးနိုင်တယ်။ အဲ့ဒီအခါ ထုတ်လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။ထုတ်လုပ်ခြင်း ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း များနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အော်ပရေတာတွေအနေနဲ့ အဖုံးသယ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိတိကျကျလိုက်နာဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီ CL-1200 စက်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ၁၀၀% သော အဖုံးတွေက ပုံစံမပျက်စေဘူးဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် အော်ပရေတာတွေကလည်း ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ် အရမ်းအာရုံစိုက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ဒီစက်က အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်းမှာရှိတဲ့ အဖုံးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး အဖုံးတွေ သယ်ယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွေ့လျားစက်မှာပါရှိတဲ့ လေမှုတ်စနစ်ကြောင့် ၁၀၀%သော အဖုံးတွေက အဖုံးပြွန်ထဲကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဖုံးပြွန်ရဲ့ အများကြီးထည့်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ကြောင့် အဖုံးတွေကို တစ်လှည့်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ရွှေ့ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(CL-1200 အော်တိုအဖုံးသယ်တဲ့စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Within water bottling industry, food hygiene and safety is strictly required. Detecting anomaly inside the jars to reject unqualified jars is crucial. Thus, to supply the premium 20L jars to the market, it is recommended that the customers should invest this Anomaly inspection machine (DJ-100) The machine is equipped withalight system to inspect the jars ataspecific probability. The 20L jars can be randomly inspected with this Anomaly inspection machine (DJ-100) The light system will help to detect anomaly inside the jars and to check if the jars are qualified or not, from which rejecting unqualified jars.
ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံမှာ ရေသန့်ရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုက အလွန့်အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ အရာတွေကို စစ်ဆေးဖို့က အလွန်အရေးပါပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဈေးကွက်မှာ ပရီမီယမ် ၂၀ လီတာရေဘူးတွေကို ရောင်းချဖို့ဆိုရင် DJ-100 စက်ကို ဝယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ဒီစက်မှာ ဘူးတွေပုလင်းတွေကို အသေးစိတ်စစ်ဆေးဖို့ မီးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။၂၀ လီတာဘူးတွေကို ဒီစက်နဲ့ ကျပန်းစစ်ဆေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီစက်မှာပါတဲ့ အလင်းစနစ်က ဘူးတွေပုလင်းတွေမှာရှိတဲ့ မူမမှန်တဲ့ အရာတွေကိုစစ်ဆေးရန်၊ ဘူးတွေက အရည်အသွေးပြည့်မီမမီစစ်ဆေးရန်နဲ့ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ဘူးတွေကို ဖ်ာထုတ်ရန် ကူညီပေးပါတယ်။
(မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးတဲ့စက် DJ-100 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
6. SK-600E Heat membrane shrinking machine
This is the most modern machine currently, applying heat from the thermal power to deform the membrane and make the jars completely quickly and completely wrapped with it, ensuring nice appearance and no wrinkle. Especially, this machine is capable of automatically adjust to maintainastable heat level inside the shrinking chamber to ensure unchanged quality of the membrane.
SK-600 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစကျ
ဒီစက်က အပူဓာတ်ရှိတဲ့ပါဝါကို အသုံးပြုပြီး ပုလင်းအလွှာကို ပုံစံပျက်စေကာ ပုလင်းမှာ ရှုံ့တွခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ ကပ်နေစေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီစက်ဟာ ရှုံ့ပေးတဲ့အကန့်မှာရှိတဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး အလွှာရဲ့ အရည်အသွေးကို မပျက်စေပါဘူး။
Technical specifications of SK-600E Heat membrane shrinking machine
(SK-600 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 500-600
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 30
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 3300x650x800
The conveyor system is designed withaconveyor motor,aplastic conveyor andaconveyor holding frame.
With the length of 6m of the width of 29cm, this plastic conveyor shall help to transfer these empty jars quickly without manpower.
This machine will help to connect the decapping and washing process with the3in 1 filling machine.
ဒီစက်ကို ရွေ့လျားစက်မော်တာ၊ပလပ်စတစ်ရွေးလျားစက်နဲ့ ရွေ့လျားစက်တွေထားတဲ့ ဖရိန်တို့နဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
အလျား ၆ မီတာ၊ အနံ ၂၉ စင်တီမီတာရှိတဲ့ ဒီစက်က ဘူးလွတ်တွေကို လူအင်အားမလိုဘဲ သယ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်က အဖုံးချွတ်ပေးခြင်းနဲ့ သန့်ရှင်းပေးခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကို3in 1 လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။
(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6 ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
8. CSSG-7 Stainless steel conveyor (for jars containing water)
The operating principle of stainless steel conveyor is similar to plastic conveyor. However, the stainless steel conveyor has higher bearing capacity and high durability. Thus, it is used to transfer the fully filled water jars.
This conveyor has dimension of 7m and width of 29cm, therefore saves installation area. This part is often used to connect the3in 1 automatic filling machine with other machines such as the heat membrane shrinking machine.
CSSG-7 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ
ဒီစက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကလည်း ပလပ်စတစ်သယ်ယူကိရိယာရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီစက်က ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သလို ကြာရှည်လည်းခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်ကို ရေအပြည့်ပါတဲ့ ဘူးတွေရွှေ့ဖို့ အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစက်က အလျား ၇ မီတာ၊ အနံ ၂၉ စင်တီမီတာပဲ ရှိတာကြောင့် တပ်ဆင်ဖို့နေရာ အများကြီး မလိုပါဘူး။ဒီစက်ကိုတော့3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ အပူဖြင့်အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်နဲ့ ဆက်ထားပါတယ်။
Technical specifications of CSSG-7 Stainless steel conveyor
(CSSG-7 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ)
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 7000x290
Viet An’s commitment to the customers when purchasing our VAQGF 6003in 1 automatic filling and capping machine
When buying our customers buy VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine, the customers will be offered 1 year warranty, long-term maintenance and free shipping to 64 provinces and cities nationwide (except the islands).
Because 3-in-1 automatic filling machine VAQGF 600 is applied from advanced technology, the machine can save up to 45% power compared to other conventional filling lines, calculated annually, it can help the business save hundreds of millions dongs. Besides, the chassis is also designed with durable 304 stainless steel which is always shiny, ensuring long shelf life of up to 20 years.
Customers who buy the device will experience thoughtful caring service, enjoy various attractive promotions, and many valuable gifts.
This VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine is fully certified. We commit that our products are absolutely genuine. We commit to say NO to Counterfeit Goods - Poor quality.
In order to ensureastable system operation and capacity, it is imperative that you havea3-phase power line system ready.
Contact us at: +84 839 31 31 31 to be promptly consulted on our VAQGF 6003in 1 automatic filling and capping machine.
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ကို ဝယ်ယူသူတွေအတွက် Viet An ကုမ္ပဏီမှ ပေးနိုင်သော ကတိ
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဝယ်ယူသူတွေက တစ်နှစ်အာမခံ ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ကာလကြာရှည်တဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလည်း ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်းစုတွေကလွဲ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၆၄ ခုကိုလည်း အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ကို ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အခြားစက်တွေထက် ၄၅% ပါဝါကို ခြွေတာနိုင်ပြီး နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း လျှော့ချနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် စက်ရဲ့အောက်ခံကို တောက်ပပြီး ထားသိုနိုင်တဲ့သက်တမ်းနှစ် ၂၀ ကျော်တဲ့ 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။
ဒီစက်ကို ဝယ်ယူသူတတွအနေနဲ့ ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု၊ အမျိုးမျိုးသော ပရိုမိုးရှင်းများနဲ့ အမျိုးမျိုးသော လက်ဆောင်တွေ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ဟာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်တွေဟာ လုံးဝစစ်မှန်တယ်ဆိုတာ အာမခံနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရည်အသွေးညံ့တဲ့ ကုန်ကြမ်း အတုတွေနဲ့ အရည်အသွေးညံ့ ပစ္စည်းတွေမသုံးထားကြောင်း လုံးဝ အာမခံနိုင်ပါတယ်။
တည်မြဲတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစနစ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားမှုကို သေချာချင်ရင် ဝယ်ယူသူတွေမှာ အော်တိုအဆင့် ၃ ဆင့်ဟာ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိချင်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ချင်တ်ာဆိုရင်တော့
ဖုန်း +84 839 31 31 31 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600 ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
A. VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine - A MUST -BUY ITEM
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600-ဝယ်ယူသင့်သော ပစ္စည်း)
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 550-600
Extraction head(ထုတ်ယူသောခေါင်း) 4
Capacity (KW)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 17
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 4900x2200x2110
Weight (Kg) (အလေးချိန်) 1600
B. VAQGF 6003in 1 automatic 5Gallon washing filling and capping machine , OPTIONAL STAGES
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600-ဝယ်ယူရန် ရွေးချယ်နိုင်သော အဆင့်များ)
(BL 600 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်)
(SK-600 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
7. CSG-6 plastic conveyor
(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6)
8. CSSG-7 Stainless steel conveyor
(for jars containing water)( CSSG-7 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ)
Hỏi đáp & đánh giá3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 600